RFID Ferrite စာရွက်, Wave ကိုပစ္စည်းစုပ်ယူ RFID, RFID Anti-သံလိုက် Paste, RFID Bus Card Back Paste, RFID ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်ကာကှယျဖို့စက္ကူ
RFID Ferrite စာရွက်, Wave ကိုပစ္စည်းစုပ်ယူ RFID, RFID Anti-သံလိုက် Paste, RFID ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်ကာကှယျဖို့စက္ကူ
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း Wave ကိုပစ္စည်းစုပ်ယူ RFID, RFID ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်ကာကှယျဖို့စက္ကူ, RFID Anti-သံလိုက် Paste, RFID Anti-metal Interference Shielding Paper, RFID Bus Card Back Paste, RFID Ferrite စာရွက်
အကြိမ်ရေအဘို့သင့်လျော်သော: 125kHz / 134.2KHz, 13.56MHz
protocol စံ: ISO14443A B ကို, ISO15693
chip: Texas Instruments TI, Philips က NXP, Fudan FM11RF08, EM TK ID ကိုကဒ်
ကုန်ကြမ်း: ရော်ဘာ + ferrite + ရှားပါးသတ္တု
အရွယ်: စံခရက်ဒစ်ကဒ်အရွယ်အစား 85.5 * 54 * 1mm (± 0.05mm)
အထူ: အပါးလွှာဆုံး 0.3mm, 0.5မီလီမီတာ, 1.0မီလီမီတာ, 1.5မီလီမီတာ, 2.0မီလီမီတာ, 3.0မီလီမီတာ, စသည်တို့ကို, ဖောက်သည်ရဲ့အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အခြားအထူးမှိုအရွယ်အစားအရသိရသည်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
ကော်မှုနှင့်အတူ: Single-တဖက်သတ်တိပ်တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကို double-တဖက်သတ်တိပ်, သို့မဟုတ် 3M နှင့်အတူသာမန်အဖြူကော်နှင့်တသားတခြမ်းပေါ်ကော်, ထုံးစံတိပ်၏စျေးနှုန်းအနည်းငယ်တိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -45℃ ~ + 85 ℃
RFID anti-metal magnetic cloth material (125kHz / 134.2KHz, 13.56MHz) is also known as ferrite magnetic cloth, metal-proof magnetic cloth, metal isolation material, electromagnetic wave isolation material, electronic anti-interference magnetic cloth, commonly known as "magnetic cloth". It is made of special soft magnetic rubber and rare metal powder. It is mainly used in RFID smart cards, အီလက်ထရောနစ် tags များ, card readers, စသည်တို့ကို. for electromagnetic shielding, electromagnetic wave anti-metal interference, anti-electromagnetic interference and other fields. The principle is to paste on the surface of metal or battery, separateavariety of RFID low-frequency electronic tags, high-frequency electronic tags, smart cards, စသည်တို့ကို, for electromagnetic shielding, frequency conversion and so on. The technical problem is solved that the RFID electronic tag can not be attached to the metal surface or the card reader cannot be closely attached to the metal wall surface.
မှတ်စု: Some old style card reader nees2pieces anti-metal magnetic cloth.
I am interested in your product RFID Ferrite Sheet, Wave ကိုပစ္စည်းစုပ်ယူ RFID, RFID Anti-သံလိုက် Paste, RFID ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်ကာကှယျဖို့စက္ကူ
prev: RFID Chip + ကြေးနီကွိုင်, အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Chip + coil, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Chip + coil
နောက်တစ်ခု: ရေစိုခံဖျ Transparent ပလတ်စတစ်ကတ် Holder, hard ပလတ်စတစ်ကတ် Holder